कसरी ईमेल लेख्ने जुन खुला छ र पढ्न छ पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
कसरी ईमेल लेख्ने जुन खुला छ र पढिएको छ
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » इमेल मार्केटिङ » कसरी ईमेल लेख्ने जुन खुला छ र पढिएको छ
फेब्रुअरी 18, 2019 in इमेल मार्केटिङ ट्याग ईमेल सम्पर्क सूची खरीद गर्नुहोस् / ईमेल मार्केटिंग सूची खरीद गर्नुहोस् / ईमेल मार्केटिंग सूचीहरू खरीद गर्नुहोस् / खरीद सूची / ईमेल सूचीहरू by मिजानबोकुल
ठीक छ, तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको ईमेल मार्केटिंग रणनीति परिभाषित छ र तपाईं स्प्यामरको रूपमा cataloged हुनबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ।
अब सबैभन्दा गाह्रो आउँछ: तपाईंको ईमेलमा क्लिक गर्न र यसलाई पढ्नको लागि तपाईंको ग्राहक पाउनुहोस् .
यो नसोच्नुहोस् किनभने तपाईंले आफ्नो ब्लगको सदस्यता लिनुभयो तपाईं आफ्नो सबै ईमेलहरू खोल्नुहुनेछ। के तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं विश्वको केन्द्र हुनुहुन्छ? सब भन्दा बढी सम्भावित कुरा यो हो कि एक घण्टा पछि तपाईं यो पनि याद गर्नुहुन्न कि तपाईंले आफ्नो ब्लगको सदस्यता लिनुभयो। र निस्सन्देह तपाईं मात्र ब्लग हुनुहुन्न जसमा तपाईंले सदस्यता लिनुभयो।
आफैलाई विचार गर्नुहोस्: तपाई कति वटा ब्लगहरू वा न्यूजलेटरहरू दर्ता गर्नुभयो?
त्यो संख्यालाई2गुणा गर्नुहोस् र तपाईं वास्तविक संख्याको नजीक हुनेछ।
र यसले हामीलाई यो तथ्यमा पुर्‍याउँछ कि इनबक्स एक चौथाई बिना एक युद्ध हो। तपाईंको ईमेलले बाँकी ईमेलहरू विरूद्ध लड्नै पर्छ किनभने यो एक हो जसले ध्यान कल गर्दछ र खुला छ।
किनकि नखोल्ने ईमेल एक ईमेल हो जुन रद्दी टोकरीमा जान्छ। यो स्पष्ट छ?
हेरौं कि तपाईका हतियारहरू केहि झगडामा छन्।
जब तपाईं ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईं केवल2क्षेत्रहरू देख्नुहुन्छ:
यो पहिलो प्रभाव हो जुन तपाइँको ईमेलबाट प्राप्त भयो र खोल्ने वा फोहोरमा जाने बीचको भिन्नता।
प्रेषकसँग यो महत्त्वपूर्ण छ कि मानिसहरूले सन्देश पठाउनेलाई चिन्नेछन्। यदि उनीहरूले तपाईलाई पहिचान गरेन भने म तपाईलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि तपाईको ईमेल सीधा KO हो।
कम्पनी नाम वा तपाईंको ब्लगको डोमेन प्रयोग नगर्नुहोस् यदि यो तपाईंको नाम होईन भने। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो पहिलो र अन्तिम नाम वा कमसेकम तपाईंको नाम राख्नु भयो। केवल तपाईंसँग एक धेरै साधारण नाम छ भने तपाईं2चीज राख्न सक्नुहुन्छ। केहि उदाहरणहरू:
जीवन शैली बाट स्क्वायर गर्न फ्रान्क Scipion
2। विषय: "WIIFM - यो मेरो लागि के हो? (मेरो लागि यहाँ के छ?) “
र हामी यस विषयमा आउँछौं।
यदि हामी ईमेल मार्केटिंग अभियानको सफलतालाई यसको शुरुवातको आधारमा मापन गर्छौं भने, म तपाईंलाई आश्वस्त गर्दछु परिणामको 90% तपाईंले यस फाँटमा राख्नुभएकोमा निर्भर हुन्छ । यस मामिलामा तपाईले उही समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ जुन हामी तपाईको टिकटको शीर्षकसंगै लिन सक्छौं।
म तपाइँलाई तपाइँको मामिलाहरूको लागि विचार दिन्छु जसले तपाइँको खुल्ने दर सुधार गर्दछ:
यो स्पष्ट हुनु पर्छ।
यो कुनै तरिकामा चाखलाग्दो र सेक्सी हुनुपर्छ।
यो हुक र जिज्ञासा जगाउनु पर्छ।
त्यो ईमेल खोल्ने फाइदा बुझ्नु पर्दछ। तर सावधान रहनुहोस्, तपाईंले पूरा नगर्ने प्रतिबद्धताहरू नगर्नुहोस्, तपाईंलाई धोका दिईएको महसुस गर्ने ग्राहकबाट दण्ड दिइनेछ।
← डबल अप्ट-इन सुची
कसरी तपाईंको मेलिंग सूचीमा सदस्यहरूको संख्या छिटो बढाउने →